01 Codfish Cottage Cabin - I-Airbnb
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguTim & Rachael
Ikhabhinethi eQuaint kunye neRustic Beachfront
Le ndlu yamaplanga yasemaphandleni inendawo encinci yokuhlala/yokutyela, ikhitshi, igumbi lokuhlambela neshawa. Akukho mbane kwindlu yamaplanga kodwa zonke izixhobo zombane (ioveni nefriji) nezibane zixhaswa nge-propane. Enye ibhedi yeyona ndawo yokuhlala ibe enye ikwigumbi lokulala elincinci, zombini zibona kakuhle ulwandle. Zipholele elunxwemeni okanye uze nesikhephe sakho ukuze ufumane ezona ndawo zihamba phambili zokuloba neenkalankala ePacific NW. Soze uyilibale le ndawo! Yenze ibe sisithethe sosapho!
I-Whiskey Creek Beach NW iyibona kakuhle iJuan De Fuca. Indlu yamaplanga eyakhiwe ngamaplanga eyiCodfish ikwiimitha ezimbalwa ukusuka kunxweme oluhle lwamatye oluneendawo zokubona iiCascades zaseKhanada.
Kwiimizuzu nje eyi-25 ngaphandle kwePort Angeles, iindwendwe zethu zinokonwabela ukuzola nobuhle beOlimpiki Peninsula ngokufikelela lula kwidolophu kunye nokunyuka intaba, ukuzingela, ukuloba kunye nokubuka iindawo ongasoze uzifumane. Ininzi gqitha into onokuyenza eOlimpiki National Forest, ngoko thatha ixesha lakho uze wonwabele ukuhlala kwakho!
Iindawo ezikufutshane zeOlimpiki National Park ezifana neSol Duc, iHurricane Ridge, iHoh Rain Forest, iCape Flylvania zenza le ndawo ibe "yindawo yokukhempisha" esemagqabini onokubuka kuyo iOlimpiki Peninsula kunye needolophu ezifana neForks, iNeah Bay kunye nolwandle olufana neShi Shi Beach kunye neHobuck Beach. Hlola iipaki, uhambe ngemilambo (i-Dungeness, i-Elwha kunye nokunye okuninzi), i-kayak kwi-Lake Crescent okanye uhle ngqo kwi-Strait ukusuka kwindawo yethu yokuhamba ngesikhephe. Ngexesha lasebusika nasekwindla, yonwabela ubume bokwenene bePacific Northwest: jonga ukusefa okuphezulu, ukutyibilika kwesaqhwithi kunye nenkungu emxinwa elwandle ngamaxesha athile uthe zava kwindlu yakho yamaplanga etofotofo. Uza kuyithanda le ndawo!
* * * Umyalezo oya kwiindwendwe zethu zasebusika: UDisemba noJanuwari beyaziwa ngokuvelisa iiKing Tides. Ngexesha lemozulu embi kakhulu, ukubhukisha kwakho kusenokufuneka kutshintshwe okanye kutshintshwe. Ungonqeni ukuqhakamshelana nathi nangayiphi na imibuzo.
* * Ipolisi Engqongqo Yezilwanyana Zasekhaya: Nceda undazise xa ubhukisha ukuba ungathanda ukuza nesilwanyana sasekhaya. Sivumela isilwanyana sasekhaya esiyi-1 25lbs nangaphantsi. Kuza kufuneka ubhatale imali yesilwanyana sasekhaya eofisini xa ufika. Imali omele uyibhatale iqala ngokuzalisa. (iqala kwi- $ 10 ngosuku kwizilwanyana zasekhaya ezingezizo ezokuhlamba, ezincinci ukuba uza nezinto zokondlula ibhedi yakho). Ukuze wonge inxalenye enkulu yemali yezilwanyana zasekhaya, nceda uze nezinto zakho zokondlula ibhedi (iingubo nemiqamelo) kwiibhedi zakho. Nceda ugcine izilwanyana zasekhaya zingasebenzi kuyo yonke ifenitshala. Gcina izilwanyana zasekhaya zivuya xa ziphumile kwindawo yokukhempisha. Zigcine ziphantsi kolawulo uze uzicoce emva kwazo.
Le yindawo entle ekude, ethe cwaka nekude nesiphithiphithi sesixeko. Kwiiyure eziyi-3 eSeattle nasePortland, le yiholide emnandi.
* Sifakwe phakathi kwiindawo ezininzi ezintle onokutyelela kuzo apha kwiipaki zeOlimpiki. Yimizuzu eyi-25 ukuya kweyi-30 kuphela kwiLake Crescent emangalisayo. Zininzi iindawo zokunyuka intaba neendawo onokuya kuzo. Ayikho kude kakhulu ukusuka apho kukho indawo yokungena eSol Duc. Kwelinye icala uza kufumana iiHot Springs zeOlimpiki uze ube kufutshane nendawo yokungena kwiHurricane Ridge. I-Cape flreon okanye ihlathi le-Hoh akufunekanga liphoswe ukuba uya kwindawo ye-Sekui okanye kwi-Forks.
* Kukho ivenkile encinci yemizuzu eyi-8 kuphela ukusuka kwizindlu zethu zamaplanga , uJoyce General, evala ngo-8pm. Sisemizuzwini eyi-25 kuphela ukusuka ePort Angeles ngoko ukuba ufuna ezinye izinto onokuzikhetha qiniseka ukuba ufumana iSafeway okanye iWalmart off 101 ngaphambi kokuba ungene ebusuku.
* Ivenkile Ethengisa Ukutya Kwabumnyama yeyona ndawo intle onokukhetha kuyo ukutya okuyimizuzu eyi-5 ukuya kweyi-8 ukusuka kuthi. Ikhitshi losapho kunye nenye elishumi elinesibini kufutshane nendawo yethu. E-Port Angeles unento yonke evela kwi-burger emangalisayo kwi-Gastropub elandelayo, i-BBQ emnandi kwi-Coyote Grill, ukutya kwaselwandle kunye nesiteyikhi e-Kokopelli Grill, i-Pho yeyona ibalaseleyo e-New Saigon. Ukuze ufumane ukutya okukhawulezayo nokulula kwincwadi, i-Fast Burrito enokutya okumnandi kwaseMexico. Kwakhona iSabi Thai inokutya okumuncis 'iintupha kwaseThailand. Indawo Yokutya Yosuku Olutsha inesidlo sakusasa nesasemini kuphela, kwaye intle kakhulu! Kwi-101 usendleleni eya kwiLake crescent, zama iGranny 's Cafe ivuliwe ngexesha lasehlotyeni.
Izimvo eziyi-4 976
Siphila kuloo ndlu kwaye sinako
Sifinyelele efonini uma ubungaludinga usizo.
Uza kufumana i-imeyile kwiintsuku eziyi-3 ngaphambi kokufika enemiyalelo epheleleyo yokungena ngoko nceda uqinisekise ukuba idilesi yakho ye-imeyile nenombolo yefowuni zihlaziyiwe kule akhawunti.
Uza kufumana i-imeyile kwiintsuku eziyi-3 ngaphambi kokufika enemiyalelo epheleleyo yokun…